Austin Clarke, Mpanoratra, Teraka tao Barbade, Notsiahivina Ho ‘Feo iray Mpisava Làlana’ · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Jolay 2016 13:19 GMT
Austin Clarke, Barbadiana-Kanadiana, mpanoratra, namaky teny tao amin'ny hetsiky ny Rafitry ny Sampandraharaha Mpandrindra ny Tranomboky Nasionaly sy ny Loharanom-baovao (NALIS) tany Trinidad. Sary avy tamin'i Andrew Currie, nahazoana fahazoandàlana CC BY 2.0.
Misaona ny tontolon'ny literatiora Karibeana taorian'ny nahenoana ny fahafatesan‘ilay Barbadiana-Kanadiana, Austin Clarke, mpanoratra. Maty ny Alahady 26 Jona 2016 ilay mpanoratra, 81 taona.
Niala tao Bardade tany amin'ny tapaky ny taona 1950 i Clarke, mba hanohy ny fianarany amin'ny dingana ambony tao amin'ny Anjerimanontolon'i Toronto; tafiditra tamin'ny hetsika zon'ny olompirenena vanona izy, ary nanomboka nanoratra, namoaka ny bokiny voalohany, “The Survivors of the Crossing” – ireo tafavoaka velona tamin'ny fiampitàna -, ny taona 1964. Tamin'ny alalan'ilay mpisehatra fototra ao aminy, — mpikapa fary — manadihady ny vokatry ny fanjanahana sy ny fanandevozana amin'ny politika sy ireo fifandraisana ara-piaviana tao anatin'i Barbade nialohan'ny fahaleovantena ilay tantara; fa fantatra kokoa tamin'ilay bokiny “The Polished Hoe” i Clarke, boky izay nahazo loka maro ho an'ny literatiora, tafiditra amin'izany ny “Scotiabank Giller Prize” (2002), ny “Commonwealth Writers’ Prize for Best Book Overall” ary ny “Trillium Book Award” (samy tamin'ny 2003). Dimy taona talohan'io, nampidirina ho Mpikamban'ny “Ordre du Canada” ihany koa izy.
Vao nivoaka ny vaovaon'ny fahafatesany, nanomboka niparitaka tao amin'ny media sosialy ireo fahatsiarovana. Nandefa izao ny mpampiasa Facebook, HoneyJam Barbados:
Mandria Am-Piadanana ry ilay goavamben'ny Literatiora, Austin Clarke, izay maty androany tany Toronto. Nahazo loka iraisampirenena lehibe maro izy noho ny asa-sorany. Narani-tsaina izy, feno fanahy, tsy katahotra, mpikatroka mafana fo, poeta, mpanao hatsikana, mpandalina fianarana, mametra-panontaniana sy manao fanamby hatrany amin'ny zavamisy, mitàna ny olona ho tomponandraikitra foana, miditriditra matetika amin-javatra mahatonga resabe, fa vonona ny hizaka ny vokatry ny fomba fijeriny sy ireo maharesy lahatra azy kosa. Milaza ny eritreriny tsy amin-tahotra izy, manontsakontsana ny zava-misy, tiany ho fantatsika ny tantarantsika, ny firenentsika, ny kolontsaintsika, mba tsy ho tsy te-hahalala izany isika, mba handini-tena isika ary hikendry ny hanao ny tsaratsara kokoa hatrany. Nankalazaina sy nankasitrahana be izy saingy nitahiry ny maha-izy azy tsy niova mihitsy. Olompirenen'ny tany tontolo izy fa kosa avy any Barbade foana. Zanakalahy teraka teto ary mirehareha ny amin'izany izy.
Nitalaho ny mpampiasa Facebook iray hafa, Rick Halpern:
Fahaverezana lehibe. Feo manan-danja tsy ho an'i Kanada sy Karaiba ihany fa ho an'ny tany mihitsy
Nirehareha ny nilaza ny fananany azy ihany koa ireo Kanadiana mpisera amin'ny Aterineto:
Nanoratra ny bokiny voalohany taloha'ny hitenena'i Frye hoe ” “aiza ny eto,” i #AustinClarke, talohan'i Atwood, talohan'i Munro. Kanadiana mpanoratra, manana fotokevitra ijoroana izy.
Tsy mahavita maneho tsara ny tena nahazava-dehibe ny fisian'i #AustinClarke tamin'ny literatioran'i Kanada, ny taona 1970. Feo iray mpamaky lay.
Nizara ny fiantraikan'ny asa-soratr'i Clarke taminy ilay Trinidadiana, Jonathan Ali:
Mandria am-piadanana Austin Clarke. Tafiditra amin'ireo boky tena tiako amin'ny Fitantaràna momba ny tena ao Karaiba ireo fahatsiarovany mampihomehy “Pigtails ‘n’ Breadfruit” sy “Growing Up Stupid Under the Union Jack” (Nitombo tanaty hadalàna fony fitondràn'ny Union Jack).
Tao anatin'ny fitsapankevibahoakan'ny Vondrona Eorôpeana tao Royaume-Uni, nisy iray mpampiasa Twitter nanoso-kevitra adaladala ireo lohateny faramparan'ireo bokiny ho an'ireo Britanika :
Tena mpanoratra mahagaga i #AustinClarke, ary nanoratra mihitsy ity boky torolàlana ity ho an'ireo taranaka vaovao taorian'ny #Brexit ao Royaume-uni
Ao amin'ny pejy Facebook, Black Canadian Veterans Stories of War (Tantaran'ny Ady Avy amin'ireo Kanadiana Mainty Bekotro Maroholatra), ny zanakalahin'ilay Barbadiana iray bekotro maroholatra, sady poeta, dia nandefa sary nataony manokana misy an'i Clarke mihomehy, tao anatinà palitao, pipa mihantona amin'ny vavany; sady manazava hoe:
maty androany i Austin Clarke,ilay mpanoratra naman'ny raiko. Samy teraka tany Barbade izy raolahy ary samy tia poezia. Fakàna sary feno fihetseham-po an'i Mr. Clarke, nalain'ny raiko…Owen Rowe… bekotro maroholatry ny Ady Lehibe Faharoa, sady poeta
Niaiky ny fahafatesany ihany koa ny “Bocas Lit Fest” — iray amin'ireo fetiben'ny literatiora Karibeana be mpijery indrindra — :
Maty tamin'ny faha 81 taonany i Austin Clarke, Barbadiana-Kanadiana nahazo ny loka @cwwriters, @GillerPrize ary loka maro hafa.
Natsofoka ho anatin'ny lisitry ny hahazo ny OCM Bocas Prize ho an'ny Literatiora Karibeana ny taona 2016, ny ′Membering – fahatsiarovana ny taona 2015 an'i Clarke,
Tao amin'ny Twitter, notsiahivina ho tsara fanahy, malala-tànana ary manana ny talenta tena izy i Austin:
Marani-tsaina. Mambabo fo. Mampihomehy. Malala-tànana amin'ireo mpanoratra vao misondrotra. Tena nanam-bitana izahay nanana azy. #AustinClarke
Austin Clarke: lehilahy manam-pahendrena tsy hay faritana. Misaotra namerina namolavola sy nanamboatra ho amin'ny laoniny ny literatiora Kanadiana. #austinclarke #ripaustinclarke
Ireo hafa mpisera amin'ny Aterineto — mpanoratra asa-soratra maro sady mpamaky mazoto mitaky asa-soratra ihany koa — nieritreritra fa nitaky ny hanaovana jery todika ny fahalasanan'i Clarke. Rhoda Bharath nandefa sarin'i Clarke, milaza hoe:
Mila maka aina aho amin'ity.
Nanampy izao i Patricia Worrell, izay leon'ireo fahaverezana goavana natrehan'ny faritra tamin'ity taona ity hatreto:
Mikapoka indray ny taona 2016.